U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 15aad - Ceelhuur Online
Home > SHEEKOOYIN > U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 15aad
U Gabara Deegaan Dhan | Qeybta 15aad
April 13, 2018 admin915
Muraayo waxaa u dagsan qorshe ay is leedahay wuu kuu shaqayn doonaa haddii ay Shamso ka caawiso.
Waxay damacsantahay in ay Shamso ka codsato in Cali ay wacdo, lana yeelato xiriir joogto ah, maadaama guriga Ree Warfaa iyada laga yaqaanno, lagana tix galiyo. Muraayo qorshaheedu wuxuu farayaa in kolkii Cali iyo Shamso saaxiibo sheeka-wadaag ah noqdaan, in Shamso ay Cali ku marti qaaddo guriga Muraayo. Muraayo markaas bay rabtaa in ay Cali ka meyrto fikirkii uu ka aaminsanaa. Waxay rabtaa in ay dabeecaddeeda dhan ay badasho, isu ekeyso qof degan, aanan hadal badnayd, marka kaliya ay hadashana, afkeedu xikmadi ka burqato, “naa Shamsooy waad is taqaane, maxaad riwaayadda isugu dhigaysaa?” bay kaligeed isu sheegtay.
Waxaa muhiim ah in Shamso ay hubiso in Cali wiciddaan tirada badan uusan u arkin in la doondoonayo. Waa muhiim, in ay caddahay, in uu ogyahay in ay si walaaltinimo ah ula sheekeysato.
Qorshaha Muraayo waxaa ugu jira in ay Shamso ka dhaadhiciso in moowduucyada laga hadlayo lagu soo koobo reerka oo la iska waraysto, waxbarashada halka ay marsiinayaan, iyo sida ay u arkaan iskuulka ay wada dhigtaan.
Waxay rabtaa in ay Shamso u sheegto, kuna adkayso, in aysan marnaba, ilbiriqsiba ha ahaatee, aanan wax shukaansi u eg laga hadal, sida, in aanan deriska xitaa cidii aroos qabta aanan lasoo hadal qaadin. Sheekada oo dhincaas usii leexanaysa markii ay aragto Shamsana, Muraayo waxay rabtaa in sheekada loo wareejiyo meel kale.
Muraayo waxay qorsheyneysaa in haddii Cali uu sheekada shukaansi u rogi tago laga rabo Shamso in ay ka hadasho shuban biyood dhowrkaas beri magaalada ku jiray, roob badan oo Banaadir iyo nawaaxigeeda ka da’ay daraadiis. Waxaa laga rabaa in Shamso ay Cali weydiiso sida wax looga qaban karo mushkiladaan soo laalaabatay ee keenta in xilli roobaad kasta uu cudurro la yimaado.
Muraayo intii ay qorshahaan dejinayso oo dhan waxay barraaqdaa halkii saaka ay caruurta quraacda ku siisay. Waa salli dirin ah oo islaan dariskooda ah ay caw ka samaysay. Salligaan oo yaalla waab guriga ku dhextaal oo jiko ahaan loo isticmaalo hortiisa, ayay inta badan markii ay guriga joogto fadhisaa. Subixii waa hoos oo guriga darbigiisa baa qoraxda kaga aadan, galabtiina waa hoos oo geedka caleema weynaha ah ee guriga ku dhex yaalla baa hoos ka dhiga. Markii aysan shaqo hayn, isla salligaas korkiisa bay galab iyo subax Muraayo leyliga iskuulka ku samaysaa, waxna ku aqrisataa.
Muraayo mar ay isleedahay gabar saakay suuqa ay adeeg uga dirtay waa soo dhawdahay, bay inta xaabxaabsatay is tiri saaxiibtaa Shamso wac oo qorshihii aad dejisay ka dhaadhici intaadan qada karin ku mashquulin.
Taleefankii oo waabta dhex yaalla inta gambar agtiisa gees u tuurnaa toosisatay, caradiina, iyadoo caruurta habaaraysa, ka jafjaftay ku fadhiisatay oo Shamso wacday.
“Naa waa Muraayo, ii dhiib Shamso war badi baa facaa kaa reebaye” bay Samsam oo taleefankii qabatay ku canaanatay. “Haye sug waan u yeerayaa” bay Samsamna ku jawaabtay, iyadoo taleefankiii kor u haysana “Shamsooy, garoobeey baa ku rabtee kaalay la hadal” la qaylisay. “Naa ma anigaad garoobeey iigu yeereysaa ibliisadyahay yartaa?” bay Muraayo boobsiis xanaaq ku jiro u tiri iyadoo hadaladda kale ay daldashay si fiican aanan loo maqlayn.
“Labo oday baa isoo furtay, garoobna ma ihi, ciddii kaa aqrisanaysa orod u sheeg, aniga iguma socotee” bay Samsamna isku difaacday, mar labaadna Shamso u qeylisay.
Muraayo waa jeceshahay kaftanka iyada iyo Samsam dhex mara markasta, laakiin marmar bay is tiraahdaa gabadhaan yartaa ood isku af bartay, armay dadka dhexdooda mar kugu ceebeysaa?
Shamso oo si isu xanaajineysa baa taleefankii qabatay. Muraayo oo la moodo in inta ay qorshaha Shamso u sheegeyso ay sugi weysantahay baa hadalkii inta qaadatay shan daqiiqo kaligeed daldalantay.
Mar ay is leedahay hadalkii waa dhamaysatay, bay Shamso inta soo dhex gashay tiri “hadeer ma intaas baad iisoo wacday?”. Muraayo oo war mooge ah baa daftoo tiri “maya, iisug aan kuu dhameeyee” hadalkeediina sii wadatay. Sida Cali laga yeelayo, iyo sida la rabo in ay Shamso samayso, iyo waxyaalaha la rabo in ay Shamso iska ilaaliso bay hal mar sidii in ay loox ka aqrinayso is daba dhigtay.
Shamso oo gacanta lasii eeganaysa carrabka taleefanka laga damiyo, xarigiisana salsalaaxaysa baa tiri “abaayo, sadex habeen si fiican uma seexan, oo gurigaan iyo caruurtiisa baan hooyo iyo aabe u ahaa. Casharadayda tabar aan ku aqristo waan waayay, iyadoo wali ay imtixaannadii soo dhawyihiin, hooyaday iyo aabahay in ay isi sii qabi doonaan ma hubo, welwel baa wadnihii i cadaaday, adna inta isoo wacdid baad i leedahay kaalay nin islaameed, oo reer u jooga ila qayaan oo been ila dhis” iyadoon Muraayo hadal ka sugin bay taleefankii isi saartay, kuna gunuunucday, “qofkaad aragtid, qof aanan rabin buu ka daba ordayaa, aniga lee saaqaas igala taga, jacayl jacayl kiina ma aqaane”.
Muraayo sida ay Shamso ula hadashay, oo ah si aysan waligeed kuna arag kana filanayn, maadaama Shamso sideeda caadiga ah ay iska tahay qof dabacsanoo qof kasta siduu doono ka yeesho, waxaa uga darnaatay, ceebta ah in ay saaxiibteed oo kaligeed ah, hooyadeedna ay reerkii ka carootay aysan ka war hayn. Iyadoo is ceebsanaysa bay go’aansatay inta sheekadaan Cali iska xirto in ay bal galabta u tagto oo soo caawiso, soona madadaaliso.
Maanta waa maalintii Ree Sandhool iyo Ree Xiirane ay ballansanaayeen. Ree Sandhool galabta shaqo kale ma qabsan, oo gurigoodii awalba iska sharaxnaa bay hadana sii qurxiyeen. Sambuus, daango, shaah iyo qaxwaba waa la diyaariyay. Jaamac Sandhool iyo xaaskiisa Cibaado Dhuunkaal waxaa wehliya oo Ree Xiirane wax ka sugaya Muumin Sandhool, Jaamac walaakiis, oo ah bahdooda curadkooda, jufadoodana nabadoon u ah. Mar ay fadhigii ku caajiseen, wax soo socdana ay waayeen bay Muumin iyo Jaamac magaalada iska aadeen, iyagoo la yaaban reerka gabadha rabay waxa ku dhacay.
Cabdi Xiirane nin balanta ku fiican buu ahaa, laakiin qalalaasaha soo gaaray reerkiisa dartiis buusan kuba xasuusan in balantu maanta ahayd. Muxuu gabar doontaa, hooyadii reerka baananba gacan lagu hayne!
Dhowrkii maalmood ooy xaaskiisu carada ku maqnayd Cabdi Xiirane, shaqo aan raadiskeeda ahayn ma uusan qaban. Guriga aabaheed ooy aadayna maalintii laba jeer buu tagaa, oo waa mar uu odaga la sheekeysanayo iyo mar uu hadba alaab ay u baahantahay u geeynayo.
Absame, Malyuun aabaheed waa nin oday dhaqameed ah, wax saas ahna aanan ka weyneyn Cabdi Xiirane. Cabdi iyo isagu aad bay isku fahmaan oo gabadhiisa isagaa Xiirane siiyay mar ganacsi uu dhex maray.
Cabdi Xiirane nin wuxuu ahaa doobnimo ku weynaaday, noloshiisa inteedii badnaydna shaqo ku jiray. Isaga iyo Jaamac Sandhool oo isku da’ ah bay Jaamac lixdiisa caruur ah Muno u yartahay, halka Cabdi Xiirane curadkiisa Ciise uu Muno sanad kaliya ka weyn yahay.
Malyuun Absame dhowrkii sano uu Xiirane qabay ee u horeysay aad bay uga xishoon jirtay, maadaama uu aabaheed saaxiib la ahaa. Hadeerse in kasta ooy isbarteen, marmarna kaftan iyo farakacayaar sameeyaan, hadana xushmo weyn iyo qadarin bay u haysaa, oo aad bay u qadarisaa, taas ooy hadeer, bay leedahay, sababtay in uu isaga samaysto wuxuu doono isagoon iyada la tashan.
Dhowrkii maalmood uu isaga soo daba noqonayay, waa ka diiday fikir kasta iyo balanqaad kasta uu ula yimaaday. In la furo waxaan ahayn ooy xal u aragto waa sheegi diiday. Cabdina taas xal uma arko oo naagtiisa in loo soo celiyo ayuu doonayaa waxay doontaba haku qaadatee.
Absame wuxuu ku taliyay in Cabdi Xiirane uusan guriga imaan, inta ay Malyuun caro jarayso, kadibna la isku dayo in la waraysto, wixii ay rabtana ay sheegato, guri dumis xal iyo talo midna maahane.
Xiirane isagoo ka xun buu taladaas qaatay, howlihiisii iyo reerkiisii uusan labadoodaba niyad u haynna isaga laabtay.
Ciise isagu balantii ma uusan iloobin, saakay oo dhanna aabihiis buu raadinayay. Guriga Awoowe Absame baa loogu sheegay in uu jiro. Guriga Awoowe taleefan kuma jiro, sidaa darteed wuxuu sugayaa intii uu aabihiis kasoo laabanayo, si ay Ree jaamac Sandhool ugu tagaan.
Isagoo labisan oo guriga deydkiisa iska daba wareegaya bay Shamso weydiisay, “oo hadeer, Illaah baan kugu dhaarshaye, ma waxay kaa tahay in Ree Sandhool gabar lagaaga doono adigoo og, waxa dhan ooy hooyo ku xanaaqday in ay arintaas tahay?” intuusan jawaabin bay Samsam oo labadooda ag maraysa, sadexle biyo ahna gacanta ku sidata ku tuurtay “intuu naag raadsanayay buu aabe naag la’aan dhigay” jikadeediina iska sii gashay.
Ciise iyo Shamso labaduba waa qosleen markii ugu horeysay intii dhowr maalmood ah, isna weydiiyeen in hooyo iyo aabe ay been sheegayaane Samsam ay malaha da’da lagu sheegayo ka weyntahay. Kaftan yar kadib Shamso waxay ka dhaadhicisay Ciise in uu magaalada iska aado, oo arintaan dhan is iloowsiiyo Aabana ka war sugo isagaa Ree Sandhool raali garayn doonee.
Xanta gabadha la doonay, iyo islaanta carootay xaafadda dhan bay kala gaartay, dadkoo dhamina waxaad moodaa in ay dhagta ku hayaan bal waxa dhici doona maadaama ay ogyihiin in Muno ninka soo doontay aysan rabin.
Barre walaashiis Muno wuu la sheekeystay wuuna kasoo hubsaday in aysan Ciise rabin. Wuxuu diidayaa in ay hadeer diido, waxyar kadibna ogolaato markii aabeheed ree Xiirane ku ceeboobo inta gabadhiisa la safto.
Arintaan soo korortay si uu saaxiibkiis Yuusuf ula socodsiiyo buu meel kasta Yuusuf ka raadiyay.
Isagoo marna is leh, sidii ay wax noqdaan bal ka war sug, marna is leh, saaxiibkaa Yuusuf hadaadan arintaan taagan la socodsiin waad kala dhimanaysaan buu Ugaas oo waayahaan maqaayadda Makko ka dhamaan la’ usoo galay, kuna dhiira galiyay in uu Yuusuf gurigooda ugu tago, una soo sheego waxa jira.
Tukaanka cid ka badasha buuse waayaye, isaga laftiisu in uu Yuusuf gurigooda ugu tago wuu rabay.
“Adiga soo Ciise saaxiibkaa ma ahan? Maxaad u rabtaa in gabadha uu rabo uu u waayo?” buu Barre isagoo la yaaban qalloociisa weydiiyay Ugaas.
“Aniga saaxiibnimo kaliya ma fiiriyo ee waxaan ogahay in Yuusuf iyo Muno is jecelyihiin, in ay is helaan baana ila quman” buu Ugaas ku jawaabay isagoo iska dhigaya nin wanaag ka talinaya, laakiin in Yuusuf uu helo Muno, si Shamso ay isaga ugu banaanaato buu ka shaqaynayaa.
“Wallaahi, Ugaasoow qof aan kugu tilmaamo ma aqaan, dhal baas baad tahay” buu Barre ku xifaaleeyay Ugaas oo gaajada ka muuqata la moodo, isagoo shaloo dhan soomanaa, in uu maantoo dhanna qandhanaa.
Indhihiisu ceel bay kasoo jeedaan. Jooggii uu Jimcihii xirnaa buuna wali, iyagoo wasaq dartood midabkoodu badalmay, xiranyahay.
Barre inta maqalka furay buu dhowr kun uga soo bixiyay Ugaas, una sheegay in uu inta ku qadeeyo, xaafadda qubeys u doonto. Ugaasse lacag la’aan ma hayne inta is gartay buu gurigoodii qabtay.
Sidii ree Xiirane ay usoo doonteen Muno reerkooda shaqo uma qaban, oo xitaa mushaaridii ay hooyadeed iyo aabeheed subax kasta u karin jirtay gabadha shaqaalaha ah bay ku daysay.
Sida loo hayo ma taqaan oo wax hadeer ka halaysan ma jiraan. Aabeheed iyo Hooyadeed nin aysan rabin kuma qasbin, sidii in lagu qasbay bayse isku duuduubaysaa oo isla dhirfinaysaa.
Barre baa markasta markuu yimaado inta qolkeeda u fuulo usoo sheekeeya. Caawana markuu yimid inta casha uu magaalada uga soo gaday u geeyay buu u sheegay in uu Yuusuf raadinayay, weysanyahayna, haddii ay tukaanka berri ula joogtase uu gurigooda ka raadin doono.
Muno sidii in war naxdin leh loo sheegay bay inta xusul suratay, oo kor sariirteedii ugu soo fadhiisatay ka codsatay in Barre uusan Yuusuf raadin.
Iyadu ma rabto in Yuusuf wax loo sheego, sababtoo ah bay leedahay, wax hadeer halaysan ma jiraan. Nin ay raacday ama la siiyay ma jiro, meeshana ma taallo sabab Yuusuf waxbarashadiisa buuq loogu furo. Markii ay sidaas ugu sharaxday buu Barre ogolaaday in uusan Yuusuf raadin.
Laba maalmood markuu sii maqnaa buu Absame u cid diray Xiirane, una sheegay in Malyuun ay hadal diyaar u tahay, walise lama yaqaano waxa ay rabto, iyo waxa ay sheegi doonto.
Xiirane isagoon meelna ku leexan buu toos u yimid gurigii sodogiis, kursi deydka loogu sii diyaariyayna aayar dhab yiri.
Wax yar markii uu guriga uu gudaha u galay ku maqnaa, dhowr jeerna codkoodu qeylo isagoo ah uu Xiirane soo gaaray, bay Malyuun iyo Aabaheed banaanka usoo baxeen Xiiranena soo ag fadhiisteen.
Absame baa hadalkii qaatay, mar uu cabaar maahmaahyo iyo sheekooyin hore tusaale usoo qaatay, buu sheekadoodii dhex galay, weydiiyayna gabadhiisa waxa ay rabto, ooy ku qanacsantahay oo gurigeedii ku celin kara.
Intii ay kursiga isku siksikineysay, gambo aanan qaldanayna toostoosinaysay, buu Xiirane hadalkii dafay oo u balanqaaday in uu wax kasta ooy rabto diyaar ula yahay, iyada kaliyana laga rabo waxaas waxa ay yihiin in ay sheegto.
“Horta, waxaan ka rabaa Cabdi in uu ii sharaxo sida uu ku keenay in uu reerkeyga maamulo isagoon aniga ila tashan inta waliba odayaal sii watay?. Reerkeyga odayaashaas baaba iiga dhaw, caruurteydana iga xiga”.
“Malyuun, aad baan uga xumahay waxa dhacay. Qalad waa dhacaa, mar danbena, waad ogatahay, qaladkaan oo kale iyo mid u eg in aanan gali doonin, oo casharkooda waad noo dhigtay, ee iga raali noqo” buu ku maslaxay.
Hadalkeedii bay sii wadatay, amarna ku bixisay in gabadhaas la doontay la joojinayo, wiilkeeduna iskuulkiisa sii wadanayo.
Cabdi Xiirane ood moodo in culays ka dagay markuu xaaskiisa hadalkeedii jileec ka dareemay baa yiri, taas waa ballan, adiga iyo wiilkaagana waad sheekeysanaysaan, adigaana u sheegaya in uu sheekadaas xiro.
Malyuun waa aamustay, aamusnaantaas ooy labadooduba u qaateen in ay tahay ogolaansho.
“Haye waad i raacaysaa soo maahan?” buu su’aalay isagoo farxad dhoolacadayntiisu ay labada dhagood sii marayaan.
“Boorsada ii saar gaariga” bay ku jawaabtay, billawdayna in ay istaagto. Cabdi Xiirane baa hadal si boobsiis ah u qaatay, si aysan u bixin, isagoo dhabarka sacabkiisa ka saarayana yiri “raali noqo boqol jeer Malyuun, xaal marinna waxaan kaaga dhigayaa, booska aan dagannahay baan kugu qorayaa, adigaa iska leh Dubaayna waan kuu dirayaa sidaad doontid uga soo adeego.
Iyadoon ju’ oran bay inta istaagtay guriga gadaal u gashay si ay alaabteeda isugu soo duwato, isaga iyo aabeheedna waa ka daba galeen si ay usoo caawiyaan.
Guriga Ree Xiirane deydkiisa waxaa kuraas caag ah ku fadhiya, Ciise oo magaaladii usoo bixi waysay, abaahiisna ka warsugaya, iyo Muraayo oo galabta reerka soo aaday bal si ay saaxiibteed Shamso garab ugu noqoto, iyo Shamso oo markii ay shaah soo dhigdhigtay inta dhar xariga ku warnaa aruurisay, iyana kursi raadsanaysa.
Caruurta intooda kale wax dugsi aaday lama arko galabta oo guriga dhexdiisa bay tubanyihiin. Samsam gabar dariska ah bay gariir la cayaaraysaa, halka Ayuub uu fiilo iyo laastiig uu hadba bulac guriga dhexdiisa ordaya la weynayo.
Iyagoon filanayn bay hal mar ganjeelkooda oo iska furnaa hooyadood dalakh kasoo tiri. In dhowr ilbiriqsi ah markii ay filashawaa isla fiirfiirsheen, bay halmar ku shamuumeen oo dhunkasho iyo jiid jiid kala daaleen.
Markii ciyaalkii ay nabdaysatay, bay maqashay cod weyn oo wiil oo “hooyo seetahay” codadkii caruurta ka dhex leh, iyadoon u jawaabin bay inta halmar dhankiisii eegtay, ishiisiina ku dhufatay teedii qolkeedii iska aaday.
Ciise waa ogyahay dhibta dhan in ay isaga ka socoto, in uu hooyadiis maslaxana wuu rabaa, laakiin wuxuu ka baqayaa caruurta hortooda in ay kula qeyliso, oo wuu iska sugay inta ay qolkeeda ka aadayso, sii uu inta uga daba tago usoo baryo.
Buuqa caruurta oonan wali xasilin, Cabdi Xiiranana boorsada habarta uu gaariga kasoo dajiyay inta u dhiibay Ciise uu ku leeyahay, “orod hooyo u gee” baa taleefankii reerka oo barandada saarnaa soo dhacay isagoo ag taagan.
“Hello waa qofma?” buu Xiirane ka horgeeyay.
“Cabdi, waa Jaamac Sandhool, reerka ka waran?”
LA SOCO QEYBTA 16AAD
Gudoomiyaha Gudiga Doorashooyinka Qaranka oo gaartay Dhuusamareeb (Sawirro)